स्ट्राबेरी क्वार्ट्ज - हेमेटाइट र लेप्डोक्रोक्साइट समाविष्ट - भिडियो
ट्याग क्वार्ट्ज, स्ट्रबेरी
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक स्ट्रबेरी क्वार्ट्ज किन्नुहोस्
क्वार्ट्ज पृथ्वी मा सबै भन्दा प्रचुर खनिज खनिजहरु मध्ये एक हो, जसलाई पृथ्वी को क्रस्ट को 12% को बारे मा बनाइन्छ। यस तथ्यको बावजुद क्वार्ट्ज सामान्य छ। यो उबाईबाट टाढा छ। क्वार्ट्ज विश्व उल्लेखनीय विविधता हो। क्वार्ट्ज संसारमा सबैभन्दा आकर्षक घटनाको बीच। त्यहाँ असामान्य समाविष्टहरू छन् जुन कहिलेकाहीं स्पष्ट क्रिस्टलहरूमा पाईन्छ। Gemologists शब्द "sagenitic क्वार्ट्ज" को उपयोग को लागि पारदर्शी रङहीन क्वार्ट्ज को सुई को विपरीत क्रिस्टल therutile, actinolite, goethite, टूर्नामेंट या अन्य खनिजों संग संदर्भित।
सबैभन्दा कम उदाहरणको उदाहरण क्वार्ट्ज रूटाइट हो। यसमा गोल्डन रटाइल वा टाइटेनियमको समाविष्ट हुन्छ। क्वार्ट्जले लोहा ओक्साइडको रातो समाविष्टतासँग धेरै नै कम पार्यो। हामी प्रायः नाम स्ट्राबेरी क्वार्ट्ज वा रातो आगो क्वार्ट्ज प्रयोग गर्दछौं। केहि नमूनाहरूसँग धेरै ठीक समावेशीकरणहरू छन् जुन केवल म्याग्नेसन अन्तर्गत देखिन सकिँदैन, क्वार्ट्जलाई उल्टै उस्तै वा कम समान समान स्ट्रबेरी रङ प्रदान गर्दछ। अन्यसँग स्पष्ट रूपमा दृश्यात्मक समाविष्टहरू छन् र रातो सुई, फ्लेक्स वा स्प्याङ्गलहरूसँग स्पष्ट क्वार्ट्जको रूपमा देखा पर्न सक्छन्।
हेमटाइट र लेपोडोक्रोसाइट
केहि स्थानहरूमा फेला पर्‍यो, स्ट्रबेरी क्वार्ट्जले हेमाटाइट र लेपिडोक्रासाइट समावेशीहरूको माध्यमबाट यसको अनूठा रंग प्राप्त गर्दछ। धेरै मानिसहरूले गल्तीले गलत भूल गरेका छन् शंकु क्र्याकल क्वार्ट्जको लागि यो रत्न, तर नजिकको परीक्षणको आधारमा, यो स्पष्ट हुन्छ कि स्ट्रबेरी क्वार्ट्ज पूर्णतया प्राकृतिक छ। साथै, यो दर्साउन लायकको छ कि नाम धेरै ज्वेलर्स द्वारा गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको छ। तिनीहरू प्राकृतिक रत्नको रूपमा गिलास र नक्कली ढु stones्गा बिक्री गर्छन्!
रत्न विभिन्न दृश्य गुणहरू छन्। यो आफ्नो मूल स्थानमा डिप्लोइडहरू। जो अझै टाढा रंगमा चट्टानहरूमा बेचेका छन् सबै मेडागास्करबाट र 100% प्राकृतिक हो। उपचार बिना, पनि वृद्धि को बिना र ताप को बिना! तिनीहरू आमा प्रकृतिबाट साँच्चै चमत्कारिक उत्पादन हुन्।
स्ट्रबेरी क्वार्ट्ज अर्थ
यस्तो रत्नको लागि जसको उपलब्धता यति छोटो छ, यसको असामान्य उपस्थितिको कारणले, यसले क्रिस्टल चंगाई र ज्योतिषविद्हरूबाट धेरै चासो लिएको छ। हामी यसलाई प्रेमको भावनाले भरिएको मुटुको उर्जालाई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्दछौं।